Uyenza njani iividiyo ezinika amagqabantshintshi kwiYouTube yakho? -YTpals
Uyenza njani iividiyo ezinika amagqabantshintshi kwiYouTube yakho?
Njengenjini yokukhangela yesibini ngobukhulu emhlabeni, iYouTube izisa abenzi bayo ngenani lokukhetha umxholo. Phakathi kweentlobo ngeentlobo zeevidiyo ezithunyelwe kwiYouTube, iividiyo ezinenkcazo ziye zangaphezulu kwiitshathi kwiimeko ezininzi.
Ividiyo echazayo ibandakanya abantu bavakalise ezabo iingcinga kunye nezimvo ngokubhekisele kwisifundo esithile (ngesihloko esihamba phambili). Iividiyo ezihlomla kwiYouTube zinokuba ziindidi ezininzi. Ezona zixhaphakileyo sisihloko okanye iividiyo zokuphendula. Apha, i-YouTuber inika uphononongo ngokubhekisele kwinto eqhubekayo enje nge-trailer yetreyini okanye ingoma. Olunye udidi lwevidiyo eyaziwayo kakhulu kuYouTube ngamagqabantshintshi asetyenziswa kakhulu ngabadlala umdlalo.
Kuba iividiyo zokuchaza zinomtsalane kubaphulaphuli abaninzi, unokufuna ukuphonononga le niche. Ukuba kunjalo, sinezinye iingcebiso zokuqinisekisa ukuba ugqwesa kwintengiso ye-YouTube ngokusebenzisa iividiyo ezihlaziya.
Iingcebiso zokwenza iividiyo ezisebenzayo ze-YouTube
1. Sebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu ukuRekhoda
Njengoko ukuthengisa ividiyo kukhula ngesantya esikhawulezayo, ukhuphiswano luyanda. Eyona ndlela ilula yokuya phambili kukhuphiswano lwakho kukwenza umxholo olungileyo. Umxholo womgangatho awubandakanyi kuphela into oyibonisayo kodwa nendlela obeka ngayo. Ukuba umxholo wakho ulungile, kodwa ividiyo kunye nomgangatho wesandi akunjalo, kukho ithuba eliphezulu lokulahleka kwababukeli kunye nababhalisi. Kuyacetyiswa ke ukuba unikele ingqalelo kuzo zontathu izinto- ezibonwayo, iaudiyo, kunye nomxholo. Sebenzisa izixhobo ezifanelekileyo (imakrofoni, iseti yentloko, ikhamera, njl.njl.) Ukurekhoda iividiyo zakho kunye nesoftware efanelekileyo yokuzihlela.
2. Thetha ngokucacileyo
Xa kuziwa kumagqabantshintshi eevidiyo, indlela othetha ngayo kunye nento oyithethayo yeyona nto ibalulekileyo. Ukuthetha ngesantya esiphezulu, ukuthintitha, okanye ukuthetha kwi-monotone kunokunciphisa umgangatho wevidiyo yakho. Kuyacetyiswa ukuba uziqhelanise phambi kokuba urekhode.
Ukwenza isishwankathelo samanqaku onqwenela ukuwagubungela endaweni yokukhumbula igama ngalinye leskripthi kunceda kakhulu. Abaphulaphuli bakho baya kuwujonga umxholo wakho ukujonga inkcazo yakho. Yiyo loo nto yenza ukuba ubandakanyeke kwaye wonwabise ukubabamba kuyo yonke ividiyo.
3. Nyaniseka kwizimvo zakho
Iividiyo ezihlomlayo zikunceda ukwakha uluntu lwabantu abanomdla okanye izimvo ekwabelwana ngazo. Kungcono ukuba nesibindi ngokwaneleyo ukuze unike impendulo ethembekileyo kwisifundo esikhethiweyo. Ababukeli bakho beYouTube kunye nababhalisi baxabisa ukunyaniseka, kwaye yile nto ibaqhubela kwisiteshi sakho. Uluvo lwakho kwinto ethile, enje nge-trailer yetreyini, inokuba nefuthe kwizenzo zabo ukuya kuthi ga kumgangatho omkhulu. Kungenzeka ukuba abantu abaninzi banokungavumelani nawe. Ungakhathazeki ukuba oko kuyenzeka. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba wonke umntu wahlukile kwaye unelungelo lokwabelana nabanye ngendlela avakalelwa ngayo ngesihloko esithile. Ukuthintela ukusabela okungalunganga okukhulu, nokuba ungasabeli kwesi sihloko okanye ushiye umnyango uvulekele izimvo kunye neengxoxo.
4. Khetha izihloko ezihamba phambili
Akukho ndawo ekuphenduleni kwinto eyenzeka kwiminyaka eyadlulayo. Abaphulaphuli bakho baya kuba nomdla kakhulu kwiziganeko zakutshanje ezenzeke kwangaloo mini okanye ngosuku olungaphambili okanye eziza kwenzeka kungekudala. Nika ingxelo yakho ngeziganeko ezinje ngokusungulwa kwe-iPhone yamva nje okanye ingoma entsha ekhutshwe nguDua Lipa. Yenza uluvo lweevidiyo ngezihloko ngelixa zihamba ukuba zihlale zangoku kwaye kufanelekile kubabukeli bakho.
Ngamafutshane, khathalela zonke izinto ezintathu ezibaluleke kakhulu kwividiyo yeenkcazo zeYouTube- umgangatho weembonakalo zakho, iaudiyo, kwaye kunjalo, umxholo! Hlala okwangoku kwaye uthembeke kwintengiso yevidiyo ye-ace usebenzisa amagqabantshintshi e-YouTube.
Uyenza njani iividiyo ezinika amagqabantshintshi kwiYouTube yakho? ngababhali beYTpals, 19 Agasti 2021
Njengenjini yokukhangela yesibini ngobukhulu emhlabeni, iYouTube izisa abenzi bayo ngenani lokukhetha umxholo. Phakathi kweentlobo ngeentlobo zeevidiyo ezithunyelwe kuYouTube, iividiyo ezinenkcazo ziye zangaphezulu kwiitshathi kwiimeko ezininzi….
Iindlela ezi-3 onokuthi wandise ukuJongwa kweYouTube
NgeYouTube ngokungaguquguqukiyo igcina ubume bayo njengenye yeqonga eliphambili kwintengiso ekwi-Intanethi namhlanje, akukho mfihlo yokuba ukusebenzisa iividiyo kwintengiso ekwi-Intanethi yeyona nto ilungileyo kwishishini. Ngokusebenzisa “ukuphuma kwayo…
Konke okufuneka ukwazi malunga ne-post-roll ads kwi-YouTube
Enye yeentengiso ezingakhathalelwanga, iintengiso zasemva kokuqengqeleka, luhlobo lwentengiso oludlala emva kokuphela kwevidiyo. Ibonakalise impumelelo enkulu kumashishini anokukhetha ukuba abantu baphendule kwiqhosha lokubizela isenzo kunokuba…